सुडान घोटालाका दोषी कैदी भारतीलाई प्रहरीकै स्कर्टिङमा होटल हिमालयमा मेजमानी
कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, २२ कात्तिक
कैदीबन्दीका पनि आफ्नै अधिकार हुन्छन् । उनीहरुलाई रोग लाग्यो भने राज्य संयन्त्रकै पहलमा उपचार गरिन्छ । यो नौलो कुरा नै होइन । तर, कैदी बन्दीलाई प्रहरीकै स्कर्टिङमा उपचारको बहानामा तारे होटलमा लगेर मेजमानी गराइन्छ भने के भन्ने ?
काठमाडौंको डिल्ली बजार सदर खोरमा कैद भुक्तान गरिरहेका शम्भु भारती भने प्रहरीबाट यस्तो अभूतपूर्व सुविधा पाउने भाग्यमानी कैदीमा परेका छन् । उनी संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका लागि खरिद गरिएको बन्दोबस्तीका सामान (एपीसी) खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर भएका ठेकेदार हुन् ।
भारतीले प्रहरीसँगको मिलोमतोमा उपचार गराउने बहानामा काठमाडौंको तारे होटल पुगेर घण्टौं मोजमस्ती गरेको प्रमाण शिलापत्रले फेला पारेको छ ।
कारागारबाट वीर अस्पताल उपचारका लागि जाने भन्दै भारती ललितपुरस्थित तीनतारे होटल हिमालय पुगेको खुलेको हो । डिल्ली बजार सदरखोरबाट उपचार गराउन वीर अस्पताल लगिएका भारतीलाई पुल्चोकमा रहेको होटल हिमालय पुर्‍याउनै पर्ने ‘बाध्यता’ प्रहरीलाई किन पर्‍याे भन्ने रहस्य भने खुलेको छैन ।
कारागार प्रशासनले भारतीलाई वीर अस्पताल उपचारका लागि लैजान अनुमति दिएको थियो । कारागार प्रशासनले भारतीलाई २० कात्तिकमा ‘भारतीलाई वीर अस्पतालको अर्थोपेडमा उपचार गराएर कुनै पनि तरिकाबाट भाग्न उम्कन नपाउने गरी कडा सुरक्षाका साथ लगी उपचार कार्य सम्पन्न हुनासाथ साविकबमोजिम थुनामा राख्नू,’ भनेको छ ।
तर, प्रहरीले भारतीको उपचार सकिएपछि डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याउनुको साटो होटल हिमाल पुर्‍यायो । स्रोतका अनुसार भारतीले होटलमा केही व्यक्तिसँग भेट्नुका साथै ‘रमाइलो’ समेत गरेका थिए । अनियमिता गरेको पुष्टि भएपछि भारतीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले गत १३ भदौमा ललितपुरको भैंसेपाटीमा रहेको उनको निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भारतीलाई १४ करोड २० लाख रुपैयाँ विगो र जरिमानासहित एक वर्ष जेल सजायको फैसला गरेको थियो । भारती निर्माण कम्पनी अस्योर्ड रिक्स लिमिटेड, लन्डनका नेपाली स्थानीय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक हुन् ।
उनीसँगै सुडान घोटालामा पूर्वआईजीपीहरु ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरु श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई समेतलाई सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
आईजीपी ठकुरी र ठेकेदार भारतीबाहेक अन्यले कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । ठकुरी र भारती दुबै डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
डिल्लीबजार कारागारले भारतीलाई उपचार गर्न दिएको अनुमति पत्र र बीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको कागजात होटल हिमालयमा छु्टेपछि प्रहरीले भारतीलाई होटल पुर्‍याएको रहस्य खुलेको हो ।
भारतीलाई अस्पताल पुर्यान डिल्लीबजार प्रहरीले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) प्रकाश ढाँटको कमाण्डमा दुई प्रहरी खटाएको थियो । तर, उक्त पत्र असई प्रकाशले छुटेको भनेर डिल्लीबजार कारागार प्रहरीलाई जानकारी नै गराएनन् ।
२१ कात्तिकमा हिमालयन होटलमा फेला परेको पत्र पुल्चोक प्रहरी मार्फत डिल्लीबजार कारागार पुगेको हो । सोही बिषयमा असई ढाँटलाई डिल्लीबजार प्रहरीले स्पटीकरण सोधेको छ ।
पुल्चोक प्रहरी प्रभागका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) माधव केसी भने उक्त घटनाबारे जानकारी नै नभएको बताउछन् । तर, डिल्लीबजार कारागारले असई ढाँटलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा होटल हिमालयले पुल्चोक प्रहरीलाई भारतीसँग सम्बन्धित कागजात बुझाएको र पुल्चोक प्रहरीले सो कागजात डिल्लीबजार प्रहरीलाई बुझाएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ललितपुर प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी टेकबहादुर राई पनि यो घटनाबारे बेखबर छन् ।
‘हाम्रो इलाकामा भएको घटना हो । पत्र भेटिएपछि मलाई जानकारी हुने पर्ने, त्यो भएको छैन । यो विषयमा इन्सपेक्टर केसीको तर्फबाट समेत लापरवाही भयो। छानविन गरी आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ एसएसपी राईले भने ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६, ०५:३०:००
बल्ने ढुंगाकाे लाेभमा ५० लाख स्वाहा
विपद्का नायकः सुरुङभित्रबाट जब शव निकालियो ...
प्रेम र पैसाले निम्त्याउँदै छ सामूहिक आत्महत्या
पाँचतारे होटलभन्दा महँगा काठमाडौंका अस्पताल
अण्डरवर्ल्ड डनको अखडा बन्दै त छैन नेपाल ? कुनै गतिविधि छैनः प्रहरी